Midira ao amin'ny fandaharana Fyrebox Affiliate
Manolotra komisiona miverimberina 30% amin'ny varotra rehetra novokarina izahay, ho an'ny fiainan'ny mpanjifa, amin'ny alàlan'ny rohy misy anao mifandraika (hita ao amin'ny pejin'ny kaontinao).
Ny Program Fyrebox Affiliate dia mamela ny mpikambana hampiroborobo ny mpanamboatra quiz ho an'ny orinasa madinika. Mpivarotra 100.000 no nampiasa Fyrebox ary misy amin'ny fiteny 39 amin'izao fotoana izao (hahatratra 50 hatramin'ny tapaky ny taona 2019 izahay). Ny valin-kafitray dia niteraka 500000 mahery ho an'ny mpampiasa anay ary ny fandraisana anjaran'ny tranokala 100.000.
Fa maninona no mizara Fyrebox amin'ny mpihaino anao?
Fyrebox dia manolotra fomba mora hanamboarana kitapom-bola ahafahana mamorona mitarika, hanabe na hanentana ireo mpihaino amin'ny Internet. Ireto misy sasany fiasa izay natolotr'i Fyrebox:
Ny lalana tsy manam-petra dia mitarika amin'ny drafitra rehetra karama
Quizzes responsable finday
Plugins ho an'ny Rafitra fitantanana ny votoaty lehibe
Fifandraisana miaraka amin'i Zapier
Hatao amin'ny kaonty Paypal etsy ambony amin'ny faha-2 isaky ny isam-bolana ny fandoavam-bola raha betsaka kokoa ny isan'ny vaomiera mihoatra ny USD $ 25 (na mitovy)Afaka miditra amin'ny fotoana tena izy ny vaomiera sy ny saranao dia aloa amin'ny faha-2 isaky ny isam-bolana mivantana any amin'ny kaonty paypal (manome ny sandan'ny karamanao mihoatra ny $ 25)
Ahoana ny fomba hidiran'ny Fyrebox Affiliate Program
Step #1: Aoka ho mpampiasa Fyrebox ary misoratra anarana amin'ny drafitra mahazatra. Tsy fepetra takiana ny maha-mpikambana fa ny mpiara-miasa izay tena mampiasa Fyrebox dia mahomby kokoa. Raha mino ianao fa hahomby amin'ny fampiroboroboana Fyrebox tsy misy kaonty fandoavam-bola, dia mifandraisa izany.
Step #2: Tsidiho ny pejin'ny kaontinao ary tsindrio ny tabilao "Referral". Ho hitanao ny rohy zaraina ho an'ny mpihaino anao.
Step #3: Zarao ny rohy mifandray aminao